» जहाँ आउँछ समस्या !त्यहा पुग्छ नायक पल शाह ! (भिडियो सहित) जहाँ आउँछ समस्या !त्यहा पुग्छ नायक पल शाह ! (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
जहाँ आउँछ समस्या !त्यहा पुग्छ नायक पल शाह ! (भिडियो सहित)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा छ । अस्पताल लगिदेउ भन्दाभन्दै बिचरा बिरामीले ट्याक्टर मै गुमाउनु पर्यो ज्यान
स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केवश चापागाईले सोमबारको घ’टना दुःखद र ग’म्भीर भएको बताए । उनले भने, ‘यो स्वास्थ्यमाथिको ग’म्भीर ला’परबाही हो । त्यस्तो घटना नहुनुपर्ने थियो भयो, तर अब सबै ग’म्भीर भएर लाग्नुपर्छ । यो सबैलाई पर्ने घ’टना हो ।’